Sidee baan ku heli kartaa caawimaad lacag la'aan ah laanta socdaalka? | infromation Legal iyo khayraadka | USAHello
Ma u baahan tahay qareen? Ma u baahan tahay in laga caawiyo socdaalka ama magangelyo? Raadi ilaha bilaashka ah ama low-kharashka sharciga ah ee qaxootiga iyo soo galootiga. Baro sida aad naftaada uga khiyaamo socdaalka ilaaliyo.
Waa maxay macnaha pro bono macnaheedu?
A pro bono qareen waa qareen, kuwaasoo ku siinaya adeegyo lacag la'aan ah. qareenno badan oo deeqay waqtigooda si ay u caawiyaan qaxootiga ama dadka aan haysan lacag ku filan in lagu bixiyo garyaqaan ama khayraadka sharciga ah. Kuwani adeegyada sharciga oo bilaash ah waxaa loo yaqaan pro bono adeegyada.
Halkeen ka heli karaa adeegyada pro bono sharci?
Lawhelp.org aad isku xira in gargaarka sharciga iyo macluumaad lacag la'aan ah. Waxay kaa caawin doona inaad ka heli pro bono iyo low-kharashka caawimaad sharci.
Halkeen ka heli karaa pro bono qareennada socdaalka?
Haddii aad u baahan tahay in laga caawiyo arimaha la xiriira socdaalka, waa dejinta waa in aad ka heli caawiyaan oo keliya ka garyaqaan liisan leh ama wakiil la aqoonsan yahay. Haddii aad weydiiso saaxiib ama qoys gargaar, ay si qalad ah ayaa kuu sheegi laga yaabaa in macluumaad aan sax ahayn in aad heli karto in dhibaato adeegyada socdaalka.
American Ururka Qareenada Socdaalka
Raadi qareen waa kuwa xubin ka mid ah American Ururka Qareenada Socdaalka.
ImmigrationLawHelp.org waa qayb ka mid ah ka mid ah LawHelp.org. Waxay kaa caawinaysaa in soo galootiga dakhligoodu hooseeyo heli caawimaad sharci.
Waaxda United States of Justice
Isticmaal map-ka si aad u dooratid gobolka iyo ka heli liiska pro bono qareenada ee gobolka.
Halkee ayaan ka heli karaa caawinaad sharci ah oo qof la xiray?
Socdaalka Qaranka Legal Services Directory
Isticmaal map ama foomka si aad u baadhid adeegyada sharciga socdaalka bixiyayaasha gobolka, gobolka, ama xarun lagu hayo. ururada Kaliya doon ahayn oo bixiya adeegyada sharciga socdaalka oo lacag la'aan ah ama qiimo-yar lagu daray buugga this.
Waxaan caawiyaan ganacsiga dadka u baahan
Khadka Qaranka Tahriibka
Haddii adiga ama qof aad garanayso uu yahay dhibane ka ganacsiga dadka, Waad awoodaa:
chat live on website ka
text "HELP" ama "INFO" in BeFree (233733)
email u soo dir help@humantraffickinghotline.org
Waxaan u baahanahay gargaar socdaalka in aan bulshada
CLINIC waa shabakad ka mid ah ururada bixiya adeegyada sharciga iyo kale soo guurey. Isticmaal ay buugga si aad u hesho urur kuu dhow.
Waxaad ka eegi kartaa caawimaad aad u dhow la FindHello, liiska our adeegyo iyo ilo ee USA. Dooro luqadaada. Ku qor magaca magaalada aad. Markaas dooran “Citizenship and Immigration.”
Waxaan u baahan tahay caawimo xagga sharciga ah ee dal kale
Xuquuqda in Exile Barnaamijka taxan adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar dalalka adduunka oo dhan. Fiiri liiska adeegyada sharciga oo bilaash ah ee dalka.
Refugee Travel Document & Xuquuqda
Macluumaadka on this page ka timaada ilo ku kalsoon tahay dad badan oo halkan ku qoran. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, fadlan la xiriir adeegyada on this page.